Nanaiky Hahitsin’i Jehovah i Jona Mpaminany | Tena Finoana
Nanaiky Hahitsin’i Jehovah Izy
1, 2. a) Inona ny vokatry ny fahadisoan’i Jona? b) Inona no ho hitantsika ato amin’ity toko ity?
TSY ifandrenesana mihitsy ao anatin’ilay sambo andehanan’i Jona. Mila tsy ho zakany intsony ilay izy. Mifofofofo ny rivotra, ka mikopakopaka be ny lain-tsambo. Ireny koa fa misy onja avo be misesisesy mandona ny sisin-tsambo, ka midridrodridroka sy mitady hitresaka ny hazo rehetra amin’ilay izy. Ny tantsambo koa amin’io miantsoantso be daholo. Miady mafy izy ireo mba tsy hampilentika an’ilay sambo. Matahotra be i Jona satria raha izao no mitohy, dia ho faty izy rehetra. Ny nataony ihany anefa no nahatonga an’izao!
2 Fa inona no nataon’i Jona? Tsy nankatò an’i Jehovah izy. Inona àry ilay tenin’i Jehovah tsy nankatoaviny, ary tsy mendrika ny hamindrana fo intsony ve izy? Araho ilay tantara, dia ho hitanao fa na ny olona tena manam-pinoana aza mety hanao fahadisoana, nefa afaka miova.
Mpaminany avy any Galilia
3-5. a) Inona matetika no tsaroan’ny olona momba an’i Jona? b) Inona no fantatsika momba an’i Jona? (Jereo koa ny fanamarihana ambany pejy.) d) Nahoana no tsy mora ny asan’i Jona?
3 Ny fahadisoana nataon’i Jona no tena tsaroan’ny olona, ohatra hoe ilay izy tsy nankatò na mafy loha. Tsara ho fantatsika anefa fa nanana toetra tsara betsaka koa izy. Olo-marina sy azo nitokisana, ohatra, izy matoa nofidin’i Jehovah ho mpaminany. Andraikitra lehibe mantsy izany.
Marina fa nanao fahadisoana i Jona, nefa nanana toetra tsara betsaka koa izy
4 Tsy milaza zavatra betsaka momba an’i Jona ny Baiboly. (Vakio ny 2 Mpanjaka 14:25.) Avy any Gata-hefera izy, izany hoe efatra kilaometatra avy eo Nazareta (tanàna nahabe an’i Jesosy, 800 taona teo ho eo tatỳ aoriana). * Oviana i Jona no naminany? Nandritra ny fotoana nitondran’i Jeroboama II, mpanjakan’ny foko folon’ny Israely. Efa ela no maty i Elia, ary i Elisa kosa maty tamin’ny fotoana nanjakan’ny rain’i Jeroboama. Nampiasa an’ireo mpaminany ireo i Jehovah mba hanafoana ny fivavahana tamin’i Bala. Niverina nanompo sampy anefa ny Israelita. “Nanao izay ratsy teo imason’i Jehovah foana” koa i Jeroboama Mpanjaka. (2 Mpanj. 14:24) Tsy mora àry ny asan’i Jona, nefa novitainy tsara foana.
5 Niova tampoka anefa ny fiainan’i Jona, indray andro. Nisy asa nanirahan’i Jehovah azy mantsy, ary tena sarotra taminy ilay izy. Fa inona izany asa izany?
“Mandehana mankany Ninive”
6. Inona no nasain’i Jehovah nataon’i Jona, ary inona avy no mety ho nahasarotra an’ilay izy?
6 Hoy i Jehovah tamin’i Jona: “Mandehana mankany Ninive, ilay tanàna lehibe, ary ambarao ny fanamelohana azy, fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsiany.” (Jona 1:2) Tsy mahagaga raha tena mafy tamin’i Jona ilay izy. Valonjato kilaometatra any atsinanan’i Gata-hefera i Ninive, ka mandeha an-tongotra iray volana eo ho eo vao tonga any. Teo ihany aloha izay, fa izao no tena olana: Nasaina nilaza ny didim-pitsaran’i Jehovah tamin’ny Asyrianina, mponina tao Ninive, i Jona. Ry zareo anefa nalaza ho nahery setra sy mpanao habibiana. I Jona amin’io tsy nisy namana nefa i Ninive ngezabe sady nantsoina hoe “tanàna mpandatsa-dra.” (Nah. 3:1, 7) Ny vahoakan’Andriamanitra koa aza moa zara raha nihaino azy, ka mainka fa ireo mpanompo sampy ireo!
7, 8. a) Ahoana no ahitana fa tena tsy te hanao an’ilay asa nanirahan’i Jehovah i Jona? b) Nahoana isika no tsy tokony ho maika hitsara hoe saro-tahotra izy?
7 Asa aloha raha izany tokoa no tany an-tsain’i Jona, fa tantarain’ny Baiboly fotsiny hoe nandositra izy. Nasain’i Jehovah niantsinanana izy, nefa niankandrefana tany amin’izay farany azony naleha. Nankany Jopa izy. Tanàna nisy seranana izy io, ka nandray sambo tao izy mba ho any Tarsisy. Misy manam-pahaizana milaza fa tany Espaina no nisy an’i Tarsisy. Raha marina izany, dia tany amin’ny 3 500 kilaometatra lavitra an’i Ninive no saika halehan’i Jona. Mety haharitra herintaona be izao ilay diany, satria hiampita ny Ranomasina Lehibe (na Mediterane). Hita mihitsy izy hoe tsy te hanao an’ilay asa nanirahan’i Jehovah azy!—Vakio ny Jona 1:3.
8 Saro-tahotra àry ve i Jona? Tsy tokony ho maika hitsara azy isika. Ho hitantsika mantsy fa tena be herim-po izy. Ary iza amintsika moa no mbola tsy natahotra mihitsy? Mitovy amintsika ihany i Jona. Tsy lavorary izy ka nanao fahadisoana maro.—Sal. 51:5.
9. Inona no tsapantsika indraindray rehefa misy zavatra ampanaovin’i Jehovah antsika, nefa inona no tsy tokony hohadinointsika?
9 Mieritreritra isika indraindray fa ampanaovin’Andriamanitra zavatra sarotra be, na tsy ho vitantsika mihitsy. Mety hampahatahotra antsika, ohatra, ny mitory ny Fanjakan’Andriamanitra, nefa izany no takina amin’ny Kristianina. (Mat. 24:14) Hoy anefa i Jesosy: ‘Hain’Andriamanitra ny zava-drehetra.’ (Mar. 10:27) Afaka manampy antsika foana àry i Jehovah mba hahavitantsika izay asainy atao. Manadino an’izany anefa isika indraindray. Mba toy izany koa i Jona, ka izay no nahatonga azy handositra. Azonao ihany àry ve izay tsapany? Inona anefa ny vokany rehefa nandositra izy?
Nahitsin’i Jehovah ilay mpaminaniny
10, 11. a) Inona no mety ho noeritreretin’i Jona rehefa nanalavitra ny morontsiraka ilay sambo? b) Tantarao ilay zavatra nitranga tampoka.
10 Eritrereto hoe iny i Jona miditra ao amin’ilay sambo, angamba sambo fenisianina. Somokotra erỳ ilay kapiteny sy ireo tantsambo manao izay hampandeha an’ilay sambo. Lasa tokoa ilay izy avy eo nivoaka ny seranana. Nihalavitra tsikelikely ny morontsiraka, ary tsy tazana intsony. Mety ho nieritreritra àry i Jona hoe afaka izy! Nivadika tampoka anefa ny andro.
11 Nifofofofo ny rivotra, ka nisamboaravoara ny ranomasina. Avo be ny onja, ka na ireny sambo be ankehitriny ireny aza angamba bitika kely raha eo anatrehany. Tsy vitan’izay fa sambo hazo no nisy tamin’izany, ka mora potika raha sendra onja mahery. Asa aloha raha efa fantatr’i Jona tamin’io, hoe i Jehovah no nampifofofofo an’ilay rivo-mahery. Henony tsara kosa anefa ireo tantsambo nanomboka niantso vonjy tamin’ny andriamaniny avy, saingy fantany fa tsy hisy vokany izany. (Lev. 19:4) Hitan’i Jona fa “ho vaky ilay sambo” raha izao no mitohy. (Jona 1:4) Ho sahiny ve anefa ny hivavaka amin’ilay Andriamanitra efa nandosirany?
12. a) Nahoana isika no tsy tokony hitsara an’i Jona hoe nilaozany natory fotsiny? (Jereo koa ny fanamarihana ambany pejy.) b) Inona no nataon’i Jehovah mba hampahafantarana hoe iza no nahatonga ilay loza?
12 Tsy hitan’i Jona izay natao, ka lasa izy natory tany ambany lakaly. Renoka be izy tao. * Tratran’ilay kapiteny izy, ka nofohaziny ary nasainy nivavaka koa. Hitan’ireo tantsambo hoe hafahafa ilay tafio-drivotra, ka nanao antsapaka izy ireo mba hahitana hoe iza no nahatonga an’ilay izy. Afaka tsirairay anefa ry zareo, ka natahotra amin’izay i Jona. Tsy ela dia hita ny marina! Hay avy amin’i Jehovah ilay tafio-drivotra, ary nataony nanondro an’i Jona ilay antsapaka!—Vakio ny Jona 1:5-7.
13. a) Inona no notantarain’i Jona tamin’ireo tantsambo? b) Inona no nasainy nataon’izy ireo, ary nahoana?
13 Notantarain’i Jona tamin’ireo tantsambo hoe mpanompon’i Jehovah, ilay Andriamanitra mahery indrindra izy, nefa nandositra ka nahatezitra azy. Izany no nahatonga an’ilay loza. Nihorohoro ireo tantsambo nahare an’izany, ka nanontany hoe inona no hataony amin’i Jona, mba hanavotana azy rehetra sy ilay sambo. Ahoana hoy i Jona? Hoy izy: “Batao aho ka atsipazo any an-dranomasina, dia ho tony ny rano. Fantatro mantsy fa noho ny amiko no mahatonga izao tafio-drivotra be arahin’oram-baratra izao.” (Jona 1:12) Marina fa tora-kovitra izy nieritreritra hoe hilentika ao amin’ilay rano. Nanonja be mantsy ilay izy sady nangatsiaka be. Tsy vitany anefa ny hamela an’ireo olona rehetra ireo ho faty, nefa izy afaka manavotra azy ireo.
14, 15. a) Ahoana no hanahafantsika an’i Jona? b) Inona no nataon’ireo tantsambo?
14 Raha tsy olona be herim-po sy mahafoy tena tsy hanao an’izany! Azo antoka fa faly i Jehovah nahare ny teniny satria tamin’izay no tena nahitana hoe nanam-pinoana izy. Tokony hanahaka azy isika, ka hitady izay hahasoa ny hafa. (Jaona 13:34, 35) Ianao ve, ohatra, vonona hanampy an’izay sahirana na kivy, na izay mila ampaherezina mba tsy hivadika? Tena ho faly i Jehovah, raha manao izany ianao!
15 Nangoraka an’i Jona angamba ireo tantsambo satria tsy tonga dia nanaiky, fa nanao izay vitany aloha mba hiadiana tamin’ilay tafio-drivotra. Vao mainka anefa nihanahery ilay izy, ka tsy afa-nanoatra intsony ry zareo. Sady nifona tamin’i Jehovah Andriamanitr’i Jona àry izy ireo no nibata an’i Jona, ka nanipy azy tany anaty rano.—Jona 1:13-15.
Nasain’i Jona nanipy azy tany an-dranomasina ireo tantsambo
Namindra fo i Jehovah ka namonjy azy
16, 17. Tantarao izay nanjo an’i Jona rehefa natsipy tany an-dranomasina izy. (Jereo koa ireo sary.)
16 Iny i Jona fa nilatsaka tao amin’ilay ranomasimbe. Niady mafy teo angamba aloha izy mba tsy hilentika. Nitopatopa be ilay rano ka namoaka roatrany be dia be. Nanalavitra tsikelikely koa ilay sambo. Nisy onja mahery be anefa nianjera teny amin’i Jona, ka nandentika azy. Dia nilentika izy, dia nilentika ihany, ka hoatran’ny tsy ho avotra intsony.
17 Inona avy no nandalo tao an-tsainy tamin’izay? Nitantara izy tatỳ aoriana hoe nalahelo izy fa tsy hahita ny tempoly tsara tarehin’i Jehovah any Jerosalema intsony. Toy ny hoe tafidina tany amin’ny lalina indrindra izy ary nahita ny fototry ny tendrombohitra. Voasaringotry ny ahidrano koa izy. Nieritreritra izy fa ho faty, ka dia ao izany no ho fasany.—Vakio ny Jona 2:2-6.
18, 19. a) Inona no nitranga tamin’i Jona avy eo? b) Inona ilay nitelina azy, ary iza no naniraka an’ilay izy? (Jereo koa ny fanamarihana ambany pejy.)
18 Tampoka teo anefa dia nisy zavatra nihetsika teo akaiky teo! Biby ngezabe sy mainty be ilay izy. Nanitsy tany amin’i Jona ilay biby, ary nosokafany be ny vavany dia nateliny i Jona!
‘Nandefa trondro ngezabe i Jehovah hitelina an’i Jona’
19 ‘Izay aho vao tena ho faty’, hoy i Jona! Nahagaga anefa fa mbola velona izy! Sady tsy sempotra izy no tsy voatsako no tsy potipotika. Mbola niaina izy, na dia efa nihevitra aza hoe ho faty ao an-kibon’ilay biby. Niaiky àry i Jona fa i Jehovah Andriamaniny no ‘nandefa trondro ngezabe hitelina azy.’ *—Jona 1:17.
20. Inona no ianarantsika avy amin’ilay vavaka nataon’i Jona?
20 Maizina be tao an-kibon’ilay trondro. I Jona anefa niandry tao, dia tao, dia tao! Nanam-potoana hisaintsainana sy hivavahana àry izy. Ao amin’ny Jona toko faharoa ilay vavaka nataony. Ianarantsika avy amin’ilay izy fa nahay tsara ny Soratra Masina i Jona. Imbetsaka mantsy izy no nanonona ny Salamo. Tena nahay nankasitraka koa izy satria niteny hoe: “Izaho kosa hanolotra fisaorana ho anao sady hanao sorona ho anao. Izay voady nataoko dia hefaiko. Avy amin’i Jehovah ny famonjena.”—Jona 2:9.
21. Inona no nianaran’i Jona tao an-kibon’ilay trondro, ary inona no tokony hotadidintsika?
21 Hitan’i Jehovah i Jona na dia “tao an-kibon’ilay trondro” aza, ka novonjeny. (Jona 1:17) Nianaran’i Jona àry fa afaka mamonjy izay tiany i Jehovah, na iza izy na iza, na aiza na aiza misy azy, ary na rahoviana na rahoviana. Izy irery no afaka miaro ny olona mba tsy haratra na ho faty ao an-kibon’ny trondro be iray, mandritra ny telo andro sy telo alina. Tena tokony hitadidy isika hoe i Jehovah no ‘Andriamanitra iankinan’ny aintsika.’ (Dan. 5:23) Tsy ho velona isika sady tsy ho nisy akory raha tsy i Jehovah. Tsy tokony hankasitraka azy àry ve isika, ka hankatò azy?
22, 23. a) Inona ny safidy tsy maintsy nataon’i Jona rehefa tonga teny amoron-tsiraka? b) Ahoana no hanahafantsika an’i Jona rehefa manao fahadisoana isika?
22 Tena nankasitraka an’i Jehovah tamin’ny fony ve i Jona, ka nankatò azy? Nankeny amoron-tsiraka ilay trondro rehefa afaka telo andro sy telo alina, ary “naloany teo amin’ny tany maina i Jona.” (Jona 2:10) Eritrereto ange e! Tsy nila nilomano akory izy. ‘Tonga fanindroany taminy’ anefa ny tenin’i Jehovah hoe: “Mitsangàna, ka mankanesa any Ninive, ilay tanàna lehibe, ary torio aminy ny fanamelohana holazaiko aminao.” (Jona 3:1, 2) Eto àry vao ho hita raha tena mahay mankasitraka izy. Handeha hitady lalana ve izy mba hahatongavana any Ninive? Tsy hainy mantsy hoe taiza no nisy azy. Inona àry no hataony?
23 Tsy nisalasala izy fa nankatò. Hoy ny Jona 3:3: “Dia nitsangana i Jona ka nankany Ninive, araka ny tenin’i Jehovah.” Nanaiky hahitsin’i Jehovah àry izy, ka tokony hanahaka azy isika. Mpanota daholo isika ka manao fahadisoana. (Rom. 3:23) Tsy tokony ho kivy anefa isika fa hanaiky hahitsin’i Jehovah, ary hankatò azy foana.
24, 25. a) Inona ny valisoa azon’i Jona? b) Inona avy ny fitahiana mbola ho azon’i Jona?
24 Inona ny valisoa azon’i Jona? Faly izy nahare fa tsy nisy naninona ireo tantsambo. Nijanona avy hatrany mantsy ilay tafio-drivotra, noho izy nahafoy tena ka nanaiky hatsipy tany anaty rano. Lasa “natahotra mafy an’i Jehovah” koa ireo tantsambo ka nanao sorona ho azy, fa tsy ho an’ny andriamani-diso.—Jona 1:15, 16.
25 Mbola hahazo fitahiana lehibe noho izany anefa i Jona. Hatsangana amin’ny maty mantsy izy. (Jaona 5:28, 29) Ho fantany koa amin’izay fa lasa faminaniana tanteraka tamin’i Jesosy ilay fotoana nijanonany tao an-kibon’ilay trondro be. (Vakio ny Matio 12:38-40.) Tena ho faly izy handre an’izany! Te hitahy anao koa i Jehovah. Hanaiky hahitsiny àry ve ianao, ka hankatò sady hahafoy tena ho an’ny hafa, toy ny nataon’i Jona?
^ feh. 4 Tsara homarihina fa avy ao amin’ny faritr’i Galilia i Jona, ary tsy izy irery fa i Jesosy koa. Niavonavona erỳ anefa ny Fariseo niteny hoe: ‘Diniho fa tsy misy mpaminany avy any Galilia.’ (Jaona 7:52) Maro ny mpandika teny sy mpikaroka milaza fa ny tian’ny Fariseo hotenenina, dia hoe tanàna tsy dia nisy dikany i Galilia, ka tsy nisy mpaminany avy any ary tsy hisy mihitsy. Tsy te hahalala ny tantara sy ny faminaniana àry ny Fariseo.—Isaia 9:1, 2.
^ feh. 12 Milaza ny Baiboly Fandikan-teny Grikan’ny Fitopolo fa nierotra mihitsy i Jona. Tsy tokony hihevitra anefa isika hoe tsy nivaky loha izy matoa lasa natory. Tsara ho fantatsika kosa fa lasa te hatory ny olona indraindray, rehefa kivy. “Rendremana noho ny alahelo”, ohatra, i Petera sy Jakoba ary Jaona, tao amin’ny zaridainan’i Getsemane, tamin’ilay fotoana mafy indrindra tamin’i Jesosy.—Lioka 22:45.
^ feh. 19 Ao amin’ny Baiboly grika, dia natao hoe “biby goavam-be any an-dranomasina” ilay teny hebreo midika hoe “trondro.” Tsy tena fantatra àry hoe inona io trondro io. Misy antsantsa lehibe mahavita mitelina olona anefa ao amin’ny Ranomasina Mediterane. Mbola misy lehibe noho izany aza any amin’ny ranomasina hafa. Ny antsantsa trozona, ohatra, mahatratra 15 metatra na mihoatra!
Efa nisy zavatra nasain’i Jehovah nataonao ve, ka natahotra hoatran’i Jona ianao?
Ahoana no ahitana fa nanam-paharetana sy namindra fo tamin’i Jona i Jehovah?
Inona ny porofo fa nanaiky hahitsin’i Jehovah i Jona?
Inona no tianao hotahafina amin’i Jona?
Hizara Hizara Nanaiky Hahitsin’i Jehovah Izy